विद्यालयको फलामे ढोका खस्दा बालकको मृत्यु ! – Namaste Dainik
August 30, 2020 NamastedainikLeaveaComment on विद्यालयको फलामे ढोका खस्दा बालकको मृत्यु !
१४ भदौ, सप्तरी । सप्तरीमा विद्यालयमा फलामे ढोका खसेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । रुपनी गाउँपालिका ४ स्थित आधारभूत विद्यालय छपकीको हालै निर्माण गरिएको फलामको गेट खस्दा सोही विद्यालयका कार्यालय सहायक चन्द्रशेखर प्रमाणीका १४ बर्षीय छोरा भूपेन्द्रको मृत्यु भएको छ ।
गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि रायपुरस्थित युनिक अस्पताल ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । शनिबार साँझ ६ः३० बजेतिर भएको उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका बालकको शव पोष्टमार्टमका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराज ल्याइएको छ ।
नेकपाको कार्यक्रमका लागि खोलिएको थियो विद्यालय
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन भनी हाल विद्यालयमा बालबालिकाको पठनपाठन बन्द छ । विद्यालय बन्द भएको ६ महिना पुगिसकेको छ ।
पछिल्लो ६ महिना यता बन्द रहेको विद्यालयलाई खोल्न लगाएर रुपनी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष छेदी इसरले आफ्नो पार्टी नेकपाको छलफल आयोजना गरेका छन् । त्यसका लागि उनले विद्यालयका कार्यालय सहायक चन्द्रशेखरलाई विद्यालय खोल्न अह्राएका थिए ।
विद्यालय खोल्न चन्द्रशेखर जाँदा पछि–पछि उनको छोरा पनि गएका थिए । नेकपाको छलफल सकेर नेता/कार्यकर्ता बाहिर गएपछि भूपेन्द्र खेल्दै विद्यालयको गेटमा पुगेका थिए । उनले निर्माण गरेर राखिएको फलामको ढोकालाई छुनेवित्तिकै उनीमाथि खसेको थियो ।
वडा अध्यक्ष इसर विकास निर्माणको विषयमा पार्टीको छलफलको आयोजना गरिएको स्वीकार्छन् । ‘छलफल ठूलो थिएन, केही नेतालाई मात्रै बोलाएर वडाको विकास सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौं’ उनले भने, ‘तर घटना चाहिँ छलफल भइसकेपछि भएको हो ।’
प्रहरी को सम्मन गरौं– यी तिनै प्रहरी हुन जुन कोरोना रोकथामका लागि नाकामा खटिएका छ्न, खाली जमिनमा बिताउछ्न रात ।